Iimpendulo ze-Semalt Kubayini i-Keyword Stuffing iholele kwizigwebo ze-Panda
UJack Miller, uSemalt uMphathi oyiNtloko uMpumelelo weMakhasimende, uya kukuxelela indlela yokuphepha ukuhlaselwa yiGoogle kwaye ekugqibeleni ufumane isikhundla esiphambili kwi-SERP.
I-website yam yahlwaywa ngo-Agasti 2013 ekuvuseleleni idatha. Ngaloo xesha, ukubuyekezwa kwe-Hummingbird kukhishwe, kwaye ezinye iindawo eziza kuhlawulwa - voulet wine buy. Ukususela ngoko, andizange ndikwazi ukuphinda ndibekwe kwindawo yokukhangela kwi-Google. Ndandula ke ndagwetywa ngoNovemba 2013, kodwa andizange ndifumane naluphi na isaziso sogaxekile logaxekile. Andizange ndenze ukudibanisa isakhiwo kwaye uhlale ujolise ekubhaliseni amanqaku amgangatho.
Ekuqaleni, andinako ukuqonda ukuba kutheni i-website yam ihlawulwa. Kamva, ndaza ndazi ukuba iGoogle ibonisa ihafu yamaphepha ami kwiphepha ngelixa isebenzisa injini yosesho iimpawu zokulungiswa. Ndisebenzise ngokuphezulu kwamanye amagama angundoqo, kwaye kunokwenzeka ukuba igama elingundoqo lihoxisa iGoogle ukuba ihlawulise iwebhusayithi yam.
Kuye kwabonakaliswa ngoku ukuba igama elingundoqo eligxininisayo likhokelela kwizigwebo zePanda, kodwa into ephambili omele uyikhumbule ukugxinwa kwegama eliphambili okanye ibinzana aliyi kukuchaphazela indawo yakho. Endaweni yoko, ukugxinwa kwamagama amanqaku kunye neengongoma kuyingozi kumaphepha akho ewebhu..Ngoxa ubhala isihloko esithile, ungasebenzisa inamba enkulu yamagama kunye namagama, ucinga ukuba ifanelekile kwiwebhusayithi yakho. Kwaye ukusetyenziswa kakubi kwegama elifanayo akulungile kwiwebhusayithi yakho ngelixa uthetha ngebhizinisi okanye imveliso ethile. Ukuba uphinda umpopasho kwaye uphawula amagama angundoqo kuwo onke amanqaku akho, ugibele i-tiger!
I-Google ineengxaki ezininzi kwiisayithi ngokupheleleyo. Xa ibukeka kwiwebhusayithi yakho kwaye ifumanisa ukuba amagama ahlukeneyo asetyenziswe ngokungaqhelekanga, kungenakukunika isikhundla esilungileyo. Izigwebo zegama eliphambili liza kufakwa kwiwebhusayithi yakho. Enye yeendlela ezilungileyo zokuphepha le ngxaki kukujonga ubuninzi begama elingundoqo kwi-Index Index ye-Google ye-Webmaster Tool. Kuza kukunika ingqiqo yintoni na amagama asetyenziswa ngaphaya kweendlela kunye nokuziphepha.
Ngokomzekelo, ukuba usebenzisa igama elithi "ishishini" kuwo onke amaphepha akho, akufanele ulibale ukuba ezininzi iiwebhusayithi ziye zazisebenzisa eli gama kumxholo wazo. Ngaloo ndlela, i-Google iya kuqwalasela ukuba uzama ukukhohlisa iinjini zokukhangela kwaye uya kubeka iimbophu kwiwebhusayithi yakho.
Unokusingatha uphinde ukhangele umxholo ofakiwe ngokuvavanya i-URL kunye ne-SEOBook ye-keyword. Ngenye indlela, kufuneka ufumane i-URL ephezulu kunye neyona ndlela efanelekileyo yegama elingundoqo usebenzisa i-plugin.
Ndivakalelwa kukuba ubuninzi be-3% okanye ngaphezulu bungabangela iingxaki njengoko iGoogle izakuqwalasela ukuba ubeka izinto eziphambili kunye namaqhosha. Endaweni yoko, kufuneka ugcine ukuxinwa kwegama elingundoqo kwi-1% ukuya ku-2.5%. Kuyafaneleka ngeenjongo ze-SEO kwaye akuyi kutyumba nayiphi na ihlawulo kwiwebhusayithi yakho.
Kwinqanaba ngalinye ubhala kwaye ushicilele, ukuxinwa kwegama elingundoqo kufuneka libe malunga ne-2.2% kwikota elilodwa. Ngokubanzi, iwebhusayithi yakho kufuneka inxulumane nabasebenzisi ngokusebenzisa umxholo onolwazi kunye nobhaliweyo. Kuya kuba kuhle ukuba ngabafundi banikezwa izinto ezifanelekileyo zokufunda. Ekugqibeleni oku kuya kuphucula amava omsebenzisi, kukukhokelela ekunandipha ininzi yendlela, izabelo ezingaphezulu, amanqaku amaninzi, kunye neendawo ezingcono.